« Amour’rire » : Fanambin’ny mpanao hatsikana ny fiakarana ny lapan’ny fanatanjahantena -
AccueilVaovao Samihafa« Amour’rire » : Fanambin’ny mpanao hatsikana ny fiakarana ny lapan’ny fanatanjahantena
« Amour’rire » : Fanambin’ny mpanao hatsikana ny fiakarana ny lapan’ny fanatanjahantena
06/02/2018 admintriatra Vaovao Samihafa 0
Ao anatin’ny fankalazana ny fetin’ny mpifankatia. Toa ny efa mahazatra azy, dia manolotra seho miaraka tamin’ireo mpanao hatsikana ny LH Pro. « Amour’rire » no lohatenin’izany amin’ity taona ity. Raha efa nahazatra ny seho hatramin’izay ny foibe ara-kolontsaina Esca (CCESca) dia fanambin’ny mpikarakara sy ny mpanao hatsikana ny fiakarana ny lapan’ny fanatanjahantena etsy Mahamasina. « Fampisehoana indroa miantaona no natao hatramin’izay, fa ezahina ho seho tokana nefa matotra no atao amin’ity taona ity, ary mitovy noho izany ny seho jeren’ny rehetra », araka ny fanazavan’i Luc Hervé Andriamihaingo, avy amin’ny LH Pro.
Mpanao hatsikana roa, samy manana ny maha izy azy no hitondra an-tsehatra ny tontolon’ny fitiavana araka ny fahitan’izy ireo azy. Hifandimby ary hiaraka hanolotra seho amin’io « amour’rire » io i Françis Turbo sy Gothlieb. Ankoatra ireo hatsikana mahazatra azy mirahalahy, dia hisongadina eny an-tsehatra sy mandritra ny seho ihany koa ireo karazan’olona filalaon’izy ireo toa an-dry Syril, Olga, Rabenitsara… ho an’i Gothlieb ary Francette ho an’i Françis.
Sambany teo amin’ny tantaran’ny hetsika teto Madagasikara no hamaky sehatra goavana toa izao, ary fanamby ho azy ireo ny hitondra zava-baovao. «Tsy maintsy misy ny vokatra vaovao entin’izy mirahalahy amin’ny maha fanamby vaovao azy. Hisy ny hatsikana sy tolotra vaovao, nefa mbola hisy ihany koa ny ampahany tamin’ireo hatsikana efa nahafantarana azy ireo hatramin’izay no mbola hiverenana, nefa amin’ny endrika mampihomehy foana », hoy hatrany ny mpikarakara.
Fandikan-dalàn’ny Bianco : Feno ny kapoaka !
Ny andininy faha-13 ao amin’ny didim-pitondrana laharana 2004-937 tamin’ny fananganana ny Bianco dia manambara fa tsy maintsy manao izao fianianana manaraka izao ny tale jeneralin’ny Bianco: “Mianiana aho fa hanatanteraka an-tsakany sy an-davany araka ny ...Tohiny
Fanonganam-panjakana 2009 : Nahatratra 214 ireo CSBII nikatona
Hetsiky ny Tim : “Nolavin’ny Prefet ny fangatahana fahazoan-dalana”
Ramtane Lamamra : « Mijery ny zava-misy marina eto Madagasikara izahay »